औचित्यहिन गणतन्त्र दिवसको शुभकामना !!! - रामकुमार परियार
Home / अनुभुती / औचित्यहिन गणतन्त्र दिवसको शुभकामना !!!
रामकुमार परियार Thursday, May 28, 2015 0
गणतन्त्र , प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र ...यस्ता जुनसुकै पर्यायको पछि तन्त्र झुण्डिए पनि तन्त्र तन्त्र नै रहेछ । शाषक आखिर शाषकै रहेछ । राजतन्त्रको नाउँमा दशकौँ एउटै परिवारका छोरा नातिद्वारा शाषित भयौँ,त्यसपछि प्रजातन्त्र जोडेर त्यही समुहले वर्षौं शासन गर्‍यो । पुनः लोकतन्त्र को नाउँमा पुरानै शत्ताका अवशेष आए सत्तामा ।
गरिब,पीडित,अशिक्षित जनताको चुलोमा आज पनि आगो बलेको छैन,कलम कापी पुगेको छैन,सिटामोल नपाएर अकालमै मर्न विवश छन । दिनहुँ अबोध किशोरीहरु बलात्कृत हुनुपरेको छ । उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपरेको छ । हत्याराहरु बिच सडकमा छाती फुलाएर हिँड्दैछन । बोक्सि/दाइजो/तलाक को निहुँमा दिनहुुँ चेलीबेटी कुटिनुपरेको छ । चुलो छोएको निहुँमा निर्घात पिटिएर बहिष्कृत हुनुपरेको छ । सन्तानको परिचयपत्रका निम्ति दर्जनौं ढोका ढकढकाउँदा पनि परिचयपत्र विहिन हुनुपरेको छ ।......यस्तो बेलाँ